/Blog/Dianabol , garari/Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Ne Dianabol Powder For Sale
Posted on 12 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Dianabol, garari.
Uri kutarisa kuti uwedzere maronda ako masimba, kukanganisa kutanga kana kuchengetedza zvakakunakira? Dianabol (methandrostenolone) poda inofanira kuva chinhu chikuru chinotevera. Tsvaga zvaunoda kuziva pamusoro peizvi anabolic steroids, kushandiswa, kubudirira, uye nzira yekudarika migumisiro yechirwere.
Kana iwe uri munhu akakura muviri, iwe unonzwisisa zviri nani kurwadziwa kwekuwana musimba mashoma. Kunyoresa kumitambo yekuita zvekuita uye kuita izvo zvinotyisa zvinoshandiswa pakushanda zvakafanana nemigwagwa yebhuku kana mapapu zvingasave zvakakwana kuti utanise misungo yako.
Kushanda kunze kune hutano hunobatsira, asi kunoda kushivirira kukuru, kusagadzikana uye nguva. Ndiri kureva, iwe haugoni kungoita zvevhiki imwe chete, zviongorore iwe kuburikidza negirazi, uye tarisira kuona masvikiro ane simba. Zvisinei, iwe unogona kuita nekuchenjera kuburikidza nekuwedzera basa rako nekubvumirwa vanabolic steroids, iyo pasina mubvunzo ichawedzera masumbu ako mukati memazuva manomwe.
Chii chinonzi Dianabol (Methandrostenolone) Powder?
Raw Dianabol iyo ikemikari inowanikwa neCAS no. (72-63-9), ari wekirasi yeC17 anabolic steroids. Iro rakasimba rakagadzirwa steroid rakawana mukurumbira kubva ku1950's. Mushonga uyu unonyanya kubatsira vatambi uye varimi venyama vanoda kuchengetedza mishonga yavo uye kusimbisa simba ravo munguva pfupi.
Anabolic steroids inozivikanwa kuva hepatoxic. Kuti kuderedza izvi, vashandi veDi Dianabol vakaisa boka re methyl pa17th nzvimbo yekoni. Iyo-double-bond inowanikwawo kune yekutanga neyechipiri maitiro eatomu ecarboni kuderedza zvingaita uye androgenic madhara sezvinonzi acne kana varume vemazhenje emukati.
Kusiyana nedzimwe steroids, Dianabol protein powder inobvumirwa munyika dzakawanda. Zvisinei, mishonga iyi ndiyo purogiramu III inodzora zvinhu uye inongowanikwa chete pamutemo, kunyanya muU.S.
Kunyange mushure meHondo Yenyika II, maAmerica neSoviet Union vaigara vachikwikwidzana uye vachitarisa kuti vaonekwe mune dzimwe pfungwa. Kunyange zvazvo ivo vaviri vaibatanidzwa muhondo chaiyo, vaifungidzirwa nekurova mumwe nomumwe mumitambo uye kuongorora kwemwedzi.
Pakati pe1940 uye 50, maRussia akatonga maOlympic, nekuda kwezvinhu zve testosterone vatambi vavo vaishandisa. Zvisinei, ichi chakavanzika chakanga chiri nguva pfupi apo iyo ndiyo US. Chiremba weOlimpiki, John Ziegler, akawana tsvina. Mukuda kwekubuda kunze kweSoviet Union, akabatana naCiba Pharmaceuticals kuti auye nechigadzirwa chakafanana.
Dianabol (methandrostenolone) powder yakavapo munguva yekupedzisira ye1950s. Yakanga yakakurumbira pakati pe1960s uye '70s sechisarudzo chisingaenzaniswi mu steroids bodybuilding.
Kusiyana nevanofanotanga, ichi chinodhaka chaiva chekutanga chinonzi anabolic steroid pamusika. Chinangwa chechirwere ichi chaiva kudivi-kutora jira risina mvumo ye steroid nevatambi. Iine zvinyorwa zvishoma uyerogenic uye inowanika kuburikidza nemirairo mune dzimwe nyika. D-bol inowedzera kaviri kupfuura testosterone.
Mikemikari uye Mamiriro Edzimiro eDi Dianabol Powder
Kemikari zita 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-imwe
Nhamba yakanyunguduka (° C) 163 - 167
Solubility · Mvura (9.7 mg / L pa 25 ° C)
Usage Inoita kuti kuwedzera kwemaviri emusumbu
Brands uye Trade mazita · Dianabol
Nzira Yokutenga Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
Kutenga anabolic steroids kunobva pane zvishoma. Nzvimbo yako ine basa rinokosha kubva kune dzimwe nyika dzakagadzirisa zvigadziriswa pamutengo, kutenga, uye kushandisa Dianabol powder. Semuenzaniso, kushandiswa kwemametandrostenolone uye zvigadzirwa zvayo hazvisi pamutemo muU.S., Australia, neKanada, kunze kwekunge pasi pemutemo unoshanda. Zvisinei, mune dzimwe nyika seMexico, Dianabol powder kutenga zviri nyore sekutenga imwe sneakers.
Kutengesa Mutemo Dianabol
D-huri inogona kunge iri mishonga inongorambidzwa munharaunda yako, asi iwe unogona kugadzirisa mutemo kubva kune chireisheni Dianabol powder manufacturer. Rega ndikutsanangurire. Kana iwe usina mutemo wepamutemo kubva kuchiremba, pfungwa yako ingangodaro ichitsvaga pamusika. Zvakanaka, chibvumirano chacho chinogona kunge chakanaka nekushandisa musuo wemushure, asi iwe unogona kunge uchienda kune mishonga yokunyengera, isina kushanda, uye inouraya.
Kunyangwe zvisinganzwisisi kutamira kune imwe nyika iyo yakanyoresa kushandiswa kwe steroids, iwe unogona kunge uri bhangi pane zvakachengetwa Dianabol powder online. Zvichida, iwe unopihwa nepamusoro-purogiramu yakagadzirwa pasi pevhu uye yakarongedzwa nemamiriro ezvinhu.
Dianabol Powder Kutengeswa
Mhando dzakasiyana-siyana dzevatengesi vepaIndaneti vari kupa vanabolic steroid kuti vatengese. Sezvo mashizha eChinese akambosviba, unogona kuenderera mberi kune Dianabol powder China, kunyanya pakutenga kukuru. Kuti uwane mutengesi akatendeseka, funga nezvepamusoro-soro inotorwa, kutumira mafaira, uye kuwanikwa kwemashoko akakodzera pane imwe nzvimbo.
Maitiro e Dianabol powder online kutenga:
Endai kune https://www.proanabolics.com/ kana chero ipi zvayo inogadziriswa yeElbobbol pfineji inoita seyi Chinese store.
Dzvanya pakutsvaga, tsvaga "Dianabol," uye tsvaga chinhu chacho
Iwe uchakurudzirwa kubhadharira nhoroondo yekutsvaga nyore kwechigadzirwa panguva yekutumira. Zvisinei, iwe unogona kusarudza kutarisa semushanyi.
Ipai nhoroondo yekodha yako
Iva nechokwadi chekurongeka uye kumirira kuendesa mberi pamusuo wako.
Cherechedza kuti mutengo wePydabbol wemafuta unobva kune mumwe mutengesi kune mumwe uye kuwanda kwauri kutenga.
Nzira Yokuita Dianabol Pamba
Mune zvakawanda zvaunogona kutenga steroid yakagadzirirwa, unogona kutenga zvakasiyana-siyana zvishandiso uye uuye newaini yako yakagadzirwa Dianabol powder. Iyi nzira inobatsira pakuti ine mari uye kutendeuka kunokubvumira kuti uenzanise chiremba mumakoratiro nemuviri wako.
Iko kune mazana mashanu Dianabol powder kutendeuka mapeji, izvo zvinowirirana maererano nemiti inoshandiswa uye muyero.
Benzyl Doro (BA)
Sterile girazi vial
Seringe uye yakashata seringe filter
Ngatitsvakei mumashoko ekuti tingaita sei Dianabol kumba;
D-huni poda 1g 20g kana 17.86ml 20g kana 17.86ml 5g kana 5.6ml 2.5g kana 2.23ml
Mafuta akanyorwa 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Shandisa mafuta matsvuku pane (31.77ml)
Kazhinji, Dbol powder inonaka inorwadza, asi zvinoshandiswa pamusoro apa zvinoderedza chishuwo.
Iyo Dianabol (D-bol) Inoshanda
Dianabol powder inhibits musumbu kubva pakuputsa apo ichiwedzera kuwedzera kweprotein uye kuwedzera kuitrogen kwekuchengetedza. Ichi chemishonga chichaita kuti muviri wako uise pfungwa dzose dzepuroteni dzakapedzisira kupinda mumisungo. Kutenda kwehafu yehafu yehupenyu, iwe uchatanga kuona rimwe rejista maitiro akanaka mukati me7 - 10 mazuva.
Steroid inokurudzira chido chomushandi, simba, uye mafungiro.
Dbol ine chiyero chehafu yeupenyu hwemaawa 4. Tichifunga kuti nguva yacho inopfupika, iwe unofanirwa kuparadzanisa muyero wezuva rose kuti uchengetedze huwandu hweropa.
Dianabol Kuziva Nguva
Steroid ichaonekwa kusvika kumavhiki masere kubvira panguva yawakatora. Kana iwe uri mutambi anoshingaira, iwe unofanirwa kumira kutora Dianabol mwedzi miviri isati yaedzwa.
Dianabol Mhinduro: Chii Chandichawana?
Anabolic steroids inoshandiswa nokudzorera maitiro emagetsi uye kuwedzera protein anebolism. Kune vashandi vekugadzira muviri, iwe unogona kunge uine hutano huri nani apo uchishanda kunze. Kunyange Dianabol angave asina kukupa maitiro epamusoro, zvinenge zvichisimudza misungo yako uye kuita kuti iwe utarise zvakakwana kudarika kare.
Kumitambo yekudzidzira, Dianabol steroid ndiyo yakanakisisa yekuwedzera kuti uwedzere simba rako nekukupa simba rekutsungirira kushanda kwakasimba. Chirwere ichi chinowedzera nguva yekugadzirisa uye panguva imwechete inoderedza kuneta.
Methandrostenolone ndiyo inonyanya kukosha yevarwere vane matambudziko mukuwana kana kuchengetedza hutano hwakanaka. Chigadzirwa chacho chinogona kukuita kuti uwedzere kusvika ku-20 mapaundi mumavhiki mashoma.
Kuwedzera Testosterone Levels
Kana iwe uchitambura kubva kune pasi pasi testosterone, chiremba wako angangodaro anopa steroid yepamutemo seDbol.
Kuwedzera kuitrojeni kuchengetedza uye kugadziriswa kwemashu, kunyanya mushure mekunyora kweganda, kuvhiyiwa, kana kupisa. Uyezve, Dianabol inoshandiswa pakurapa maitiro chaiwo ekushaya ropa.
Dianabol (D-bol) Nhamba uye Mashandisirwo (Zvakachengeteka kutora Dianabol here?)
Dhigirii Dbol dhesiyano yakaenzana pakati pe15 ne 50mg / zuva. Zvisinei, vamwe vashandi vane ruzivo vangashandisa zvakanyanya se100mg pazuva. Chinhu chakanyanya kunyanya kukosha ndechekuti maitiro makuru e steroid anozoita kuti uwedzere ropa rako.
Vakadzi uye vatsva havafaniri kutora chimwe chinhu kupfuura 15mg. Kune vatambi vechikadzi, kuwandisa kwemazuva ose ndeye 30mg. Chero kukosha kwepamusoro kupfuura izvi kunogona kutungamirira kukuwedzera kwehutano hwehutano hwemurume uye zvimwe zvisingagadziriswi dbol madhara.
Dbol ane hafu yehupenyu hupenyu, naizvozvo, chidimbu chekuparadzanisa muyero 2 - 3 nguva pazuva. Zvinokurudzirwa kutora mishonga iri pedyo nenguva dzekudya kuti kuderedze migwagwa yakafanana yakafanana neyeusea. Imwe nzira yechokwadi yekuwedzera bioavailability ya Dianabol ndeyokubatanidza michero yemafuta mukudya kwako.
Dbol ndiye wekutanga anabolic steroid inogona kutorwa nemuromo. Kunyange zvazvo mishonga iyi inowanika uye inotorwa sehwendefa, unogona kuitungamirira kuburikidza nemakirini emakumbo. Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, iwe unofanirwa kugamuchira chikwata cheDi Dianabol uchishandisa mamwe steroid seDurabolin, testosterone, Primobolan, kana trenbolone.
Chimiro chinonzi Dianabol chinopera pakati pemavhiki mana nematanhatu neine chiyero che 30 - 50mg. Mumazuva iwayo, iva nechokwadi chekuvhara steroid newaini yezuva nezuva yekakarari uye N2guard yekudzivirira chiropa kukuvara. Aromasin inofanirawo kuuya kuti ivhare maruva, izvo zvinoita kuti isrogen dzigadziriswe uye kuchengetwa kwemvura.
Dianabol migumisiro inowanzoonekwa mukati mevhiki rokutanga yekuitora. Heano kuongororwa kwehuwandu hunorema hupi hunogona kubva pane zvakazara;
Nguva (vhiki) Misa (mapaundi)
Pakupera kwemavhiki matanhatu, zvakakosha kufunga nezvemishonga epamusoro-soro kuti urege kudzivirirwa kwehomoni muzvinyorwa zvepituitary. Muzviitiko zvakawanda, kupoteredza kunoderedza maitiro e testosterone. Nokudaro, iwe unofanirwa kuita kuti hutano hudzoke kune hutano kuti urege kurasikirwa nehutu hwemasvi mawakawana. Chirwere ichi chinopera kusvika masvondo mana.
Dianabol (D-bol) Migumisiro Yakasviba: Nzira Yokudzivisa Nayo Migumisiro Yechirwere
Dianabol steroid inobatsira chete kana iwe ukashandisa nouchenjeri uchifunga nezvekuchengetedzwa uye njodzi dzinobatanidzwa. Kana ukanyanya kuwedzera muyero, inowedzera mukana wekutarisana nemigumisiro yakakomba.
Kuchengetwa kwemvura kana kubvisa
Kuwedzera kwe prostate
Kubvisa gland pituitary
Abnormal hair kukura
Kuve nemhirizhonga kana hutachiona hwehutano hwevakadzi pane dzakadzama, kuwedzera kwebvudzi, kana kuwedzera kwe clitoris.
Kuwedzera kwekuipa kweLDL cholesterol uye kuderera mune zvakanaka HDL cholesterol
Nzira Yokudzivirira uye Kutarisira Dianabol Side Effects
Shandisa aromatase inhibitor kana anti-estrogen
Dbol ine tsika yekunakisa muestrogen. Kana paine huwandu hwemhomoni iyi mumuviri, zvigumisiro ndezvokuchengetedza mvura, kubvongodza, kusabereka, gynecomastia, kana kuora mwoyo.
Mashoko akanaka ndeokuti iwe unogona kushandisa aromatase inhibitor kuvhiringidza kutendeuka kweDbol muestrogen. Mimwe mienzaniso inosanganisira letrozole, Aromasin, uye Arimidex. Iva nechokwadi kuti iwe unotora zvinowedzera izvi panguva yaDyndobbol uye mishonga inotevera.
Utano hweropa hunowedzera
Iyo yakanakisisa yokuwedzera inofanira kuderedza kutyisa kwechiropa nekudzikisa kukanganisa kweuchividhi. Kana iri nemukaka wekaka, NAC, TUDCA, pakati pezvimwe zvipfumene zvakakosha, izvo zvinoreva kuti inokodzera mutero.
Iwe unoda kutora Dianabol pamwe chete nemaminerari anovandudza cholesterol mazinga. Zvimwe zvezvinowedzera-inos zvinosanganisira mbiriso tsvuku yemupunga, hove mafuta, niacin, kana co-Enzyme Q10.
Kazhinji, chiyero che testosterone chinobudiswa nemuviri hachingakwani panguva yeDbol cycle. Kana iyo yepamusoro ichikwira pasi, kushandiswa kwemisisita ichagadzirisawo. Nokudaro, kuvhara zvimwe zvipupuriro zve testosterone ne Dianabol zvichakubatsira kuti uite chinangwa chako.
Tarisa pane zvaunodya
Tora zvokudya zvakapfuma mu omega mafuta acids uye mapuroteni ane utano. Zvokudya zvakanyanya-mafuta ndizvo zvinonyanya kukonzera kuchengetedza mvura, saka, kuwedzerwa kweropa remazinga.
Tora zviduku uye zvinodzora doses
Vatangi vemitambo havafaniri kudarika chiitiko che 20mg / zuva. Kunyange zvazvo vamwe varimi vomuviri vakagadzirira kunotakura kusvika ku100mg ye steroid, tsika yacho haina ngozi. Kana iwe uchifanira kuwedzera huwandu, 50mg yakarurama. Ikopa mizinga yakafanana nemigumisiro yakaoma yakadai sekukwira kweropa.
Cherechedza kuti denderedzwa yeD Dianabol inofanira kugara pakati pevhiki nhanhatu.
Vana, vechidiki, kana ani zvake anopfuura makore 30
Muvana, kutora Dianabol kunopindira nekufukura kwepfupa uye kukura kwepabonde.
Vakadzi vane pamuviri
Itero steroid inogona kutungamirira kuhutachiona husina kunaka
Chirwere chevarwere nekenza
Iwe uchatanga kuona maitiro ako pakarepo unotanga dhigiriji. Iwe haufaniri kuenzanisa kuenzanisa Dianabol mberi uye shure kwezvifananidzo kuti uone musiyano. Mushure mevhiki yekutanga, muviri wako uchaonekwa wakakwana, uye iwe uchaona kuwanda kwekurema.
Paunenge uchidzidzira pamitambo, iwe uchange uine simba rakakwana kuti uite basa rakaoma kana kusimudza masero akaremara. Pakuguma kwemhepo, iwe uchave wakawana chimwe chinhu pedyo ne20lbs.
Inokurudzira Human Growth Hormone yakabudiswa
Ichi chirwere chiri pakati pevashoma legal steroids iyo inokurudzira kuwedzera hormone. Kana iwe uchibatanidza danda re Dianabol nekudya kwakanaka uye kushanda nguva dzose, steroid inoshandisa magic. Kunyangwe iwe uchinge uwana mashoma, muviri wako mafuta unoderedza zvakanyanya.
Steroid yakawanda inotengeswa inoshandiswa. Zvisinei, Dianabol anorongedzwa nemumuromo nemapiritsi, mahwendefa, capsules, kana kuti mumvura. Iwe unogonawo kuita chidimbu chako cheD Dianabol powder uye kuenzanisa muyero.
Iyo yakafa yakazara madhara midzi ine kukwirira kweropa, kuora kwechiropa, uye gynecomastia. Ichokwadi kuti chifuva chako chinova chisingazikamwi chakazadzwa muzasi kwevhiki zvinogona kunge chichidzivisa. Iwe unogona kudzora mamwe ose emigumisiro nekucherechedza kurangwa kwako uye kutevera mazano, asi gynecomastia haigoni kudzora.
Dzimwe mimwe migumisiro inoita kuti vashandi vemuviri varambe vachiita izvi zvinodhaka ndezviitiko zvekushaya vana, matambudziko emwoyo, uye kukanganisa kwechiropa.
Paunosvika pakunzwa nezvevanabolic steroid, mibvunzo yakawanda ichakwikwidza kuburikidza nepfungwa dzako. "Is Dianabol mutemo here?","Ndingawana chirongwa chisina mutemo wakakodzera here?","Steroid yakagadzirwa rini?"Uye mibvunzo yakafanana. Nyaya iri pamusoro apa ine mhinduro dzose dzawave uchiedza kuwana.
Dbol kutengeswa yakanga yakapararira pakati pe1960 uye 1970 steroid bodybuilding era. Zvisinei, migumisiro yaro yakaita kuti FDA ikarongedze segadziriro yekirasi yechitatu uye inogadzirisa kushandiswa kwayo. MuUnited States, Dianabol inowanika chete kubudikidza nemishonga.
The Top 10 testosterone ester: Ndeipi yakakodzera kwauri? Oxymetholone kuongororwa: The Ultimate Guide yeOxymetholone (Anadrol)